Ogaden News Agency (ONA) – Xuska Maalinta Xasuuqa Ogadenia oo lagu qabtay xerada Dhagaxlay
Xuska Maalinta Xasuuqa Ogadenia oo lagu qabtay xerada Dhagaxlay
Maanta oo ay taariikhdu ku beegnayd 03-03-2013 waxaa xerada Dhagaxlay ee deegaanka Dhadhaab laga xusay Maalinta Xasuuqa Ogadenia oo ah maalin shacabka S.Ogadenia ayka xusaan dunida oo dhan.
Shirka maanta oo ahaa shir muhiim ah dhowr arimoodna kulansaday wuxuu furmay abaare 2:00 duhurnimo xiliga Bariga Africa shirka oo uu daadihinayay gudoomiyaha faraca MIDNIMO Maxamad. Waxaa sidii caadada ahayd lagu furay aayado qur’aan ah iyo wacdi diini ah oo uu soo jeedinayay Allaha xafidee Sh. Aadan, oo ku dheeraaday fadliga uu leeyahay jahaadka oo uu ku sheegay in uu waajib ku yahay qofkasta oo u dhashay S.Ogadenia, wuxuuna sheikh sheegay in loo baahan yahay in lagula dagaalamo gumaysiga sikasta oo loola dagaalami karo naf iyo maalna loo huro ayuu ku sii daray wacdigiisa.
Intaa kadib waxaa lagudo galay xuskii Maalinta Xasuuqa Ogadenia waxaana madasha shirka laga akhriyay warbixino ku saabsan xasuuqyadii faraha badnaa ee kadhacay wadanka ogadenia gaar ahaa kuwii dhacay bishii FEB; 1994 waxaana lasoo qaatay dhacdooyinkii foosha xumaa ee kadhacay qabridahare, qalaafe, dhagaxbuur iyo wardheer kuwaas oo ay ciidamada itoobiya bil gudaheed ay kudishay mas’uuliyiin iyo dad shacab ah oo aan waxba galabsanin waxaana aad loogu dheeraaday dhacdadii 22 FEB 1994 kadhacday magaalada wardheer taas oo lagu xasuuqay dadbadan oo rayid ah dhinaca kale waxaa laga dhawaajiyay guulihii isla bishaas lagaadhay oo ay kamidka ahaayeen go’aankii baarlamaankii ogadenia ee ahaa in afti laga qaado shacabka s.ogadenia iyo go’aankii ogayaasha iyo wax garadka ree ogadenia oo isna taageeray in afti lagaqaado dadkooda iyo waliba qab jabkii kudhacay gumaysiga iyo difaacii madaxda wadanka ee maalintii wardheer.
Intaa kadib waxaa laguda galay shirkii caadiga ahaa ee faraca midnimo ee kahowl gala xerada dhagaxlay oo manta kubeegnaa waxaana sidii caadiga ahayd lagaga wada hadlay ajandayaashii caadiga ahaa ee u yaalay faraca.
Dhanka kale gudiga faraca oo soo dhamaystay mudadii sanadka ahayd ee ladoortay ayaa manta qiimayn kusameeyay qaar kamid ah ururada bulshada waxayna sigaar ah manta u shaaciyeen qiimayn ay kusameeyeen ururuka haweenka ee faraca midnimo.
Waxaana qiimaynta maanta kuguulaystay haweenka kahowl gala section ka lagu magacaabo section G oo kakooban 10 block oo lasiiyay kaalinta 1aad waxaana kaalinta labaad galay haweenka ka howl gala section ka H. Guud ahaan ururka haweenka ayaa lasheegay in ay yihiin kuwo guta waajibaadka halgan ee saran
Guntii iyo gabagabadii waxaa lagaadhay afkaartii xubnaha oo ay xubnuhu manta dhiibteen afkaar caafimaad qabta wuxuuna shirku kudhamaaday jawi dagan.